Wonder Park Magic Rides 0.1.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.1.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Wonder Park Magic Rides
Wonder Park Magic Rides ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Wonder ပန်းခြံကို Magic စီးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏ပန်းခြံ Create! ကြောက်မက်ဘွယ် rollercoasters, ယာဉ်ပစ္စည်းများ Build, Wonderchimps စုဆောင်း, သင့်ပန်းခြံကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောသူဌေးကြီးဖြစ်လာရန်သင့်ဧည့်သည်စီမံခန့်ခွဲ။ အစဉ်အဆက်သင်၏အအိပ်မက်အပန်းဖြေပန်းခြံဘဝသို့ရောက် လာ. လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အံ့ဩ? တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ပန်းခြံအဆောက်အအုံစွန့်စားမှုအတွက်ရုပ်ရှင်ကနေဇာတ်ကောင် join ။ သငျသညျကျော Wonder ပန်းခြံသို့ဘဝရှူနိုင်ပါသလား? သုညကနေစတင်ပါနှင့်သူရဲကောင်းဖြစ်လာ!
🎢စီး: ကြောက်မက်ဘွယ်စီး Build သူတို့ကို go watch! အပြည့်အဝကာတွန်း ROLLERCOASTERS, ဗိုင်းငင်စီးပျံများရှိ, ရဟတ်နှင့်နောက်ထပ်!
🛠 Building: သင်ဟာ Wonder ပန်းခြံ၏ CREATOR များမှာ! အဆိုပါ Theme ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောဧရိယာသင့်ရဲ့အကြိုက်မှစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ Decoration, ဆွဲဆောင်မှုများ, လမ်းများနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုပန်းခြံသင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ပို Add!
📊ပန်းခြံစီမံခန့်ခွဲရေး: တစ်ပန်းခြံသူဌေးကြီးဖြစ်လာ! , စုဆောင်းယာဉ်နှင့်သင့်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာပျော်ရွှင်ရှင်သန်စည်ပင်ပန်းခြံကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပစ္စည်းများရောင်း။ တတ်နိုင်သမျှအများအပြားဧည့်သည်များရှိသည်နှင့်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မီတာဖြည့်ပါ!
🙉 WONDERCHIMPS စုစည်းရရှိ: သင်၏ပန်းခြံအားလုံးကိုသင်အကြိုက်ဆုံး WonderChimps Add! အဲဒီမှာစုဆောင်းဖို့အများကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုပြီးမှန်မှန်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ Chimpanzombies သင့်ရဲ့ Park ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုဖျက်သိမ်းဖို့ရှာဖွေနေထွက်သည် Watch!
🍭CRAFT: ပါဝင်ပစ္စည်းများ Get နှင့်ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်, Candy ပန်းသီး, Ice Cream, ဘာဂါနှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့အပန်းဖြေပန်းခြံအဓိကချက်ပြုတ်!
😄 Entertainment: သင့်လာရောက်လည်ပတ်သူများ FUN Quest ရာပေါင်းများစွာပေါ်တွင်သင်ပေးပို့မည်! အတှေ့အကွုံရဖို့နဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာသော့ဖွင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်း!
** တရားဝင် Park ကအဆောက်အအုံဂိမ်း Paramount Pictures ရုပ်ရှင်ကနေအသစ် animated movies အပေါ်အခြေခံပြီး **
"တစ်ဦးကမိန်းကလေးတစ်ယောက်, ဇွန်လ, သူမ၏အိပ်မက်များ၏အပန်းဖြေပန်းခြံတည်ဆောက်ရန်သူမ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ သူမအဟောင်းများကိုရရှိသွားတဲ့အဖြစ်သို့သော်ပန်းခြံ၏အိပ်မက်ကွာ်လည်းကြွေတတ် - သူမပန်းခြံကိုမှန်ကန်သာသူမကြောင့်ကိုကယျတငျနိုငျဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိတနေ့အထိပါပဲ။ Wonder Park က restore ကိုကူညီဇွန်လရဲ့ခရီးအပေါ်စတင်! "
* သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေ၏အပန်းဖြေပန်းခြံ Build
* Park ကစီမံခန့်ခွဲမှု - တစ်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံသူဌေးကြီးဖြစ်!
* Create အေးမြဆွဲဆောင်မှု
သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များအဘို့ * ယာဉ်ပစ္စည်းများ
* ချစ်စရာ wonderchimps စုဆောင်း
* တရားဝင် Park ကအဆောက်အအုံဂိမ်း Movie, အပေါ်အခြေခံပြီး
အမေရိကန်နှင့် ဆက်စပ်. !
Wonder Park Magic Rides အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Wonder Park Magic Rides အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Wonder Park Magic Rides အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Wonder Park Magic Rides အား အခ်က္ျပပါ
kellyskreations စတိုး01.92k
Wonder Park Magic Rides ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Wonder Park Magic Rides အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.1.1
ထုတ်လုပ်သူ PIXOWL INC.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://thesandbox.helpshift.com/a/wonder-park/?s=legal-terms&f=privacy-policy&l=en
Wonder Park Magic Rides APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ